Rakkoo Naannoo Jimmaatti Uumammetti Gareen Kewaarej Himatame
Bitootessa 15, 2011
Godina Jimmaa magaalaa Asaandaaboo fi naannootti waldootii kristaanaa fi manneen jireenyaa amantootaa gubameef garee lellistoota Islaamaa Kwareej jedhamu mummichi ministeera Itiyoophiyaa Mallas Zinawii himatanii jiran.
Obbo Mallas oduu gabaastootaaf ibsa kennaniin waldootiin kristaanaa gubamuun kan isaan yaaddesse ta'uu hubachisanii,dhaabbatooti amantii kan hawaasa musliimaa keessa gareen leellistoota hangi tokko akka jiran ni amanna jedhan.
Gareen kwaareej fi leellistonni ka biroon walii-obsii amantii akka hin jiraanneef naannoo sanatti lallabaa akka turan ni beekna kan jedhan Obbo Mallas, lellistummaan islaaamaa fi gareeleen shoroorkessotaa kutaalee biyyatti ka biroo keessatti akka hin babal'anne gochuuf hordoffiin kan godhamu ta'uu hubachisan.
Gama kaaniin immoo giddu galeessa bahaa keessumaa yemen keessatti mormiin mootummaa irratti gaggeeffamu mootummaa dadhabsifnaan Al-Qaidaa figareen leellistootaa naannoo sanatti jajjabeessuu malu jechuun sodaa qaban ibsanii jiru Obbo Mallas.
Itiyoophiyaa keessaa fi alaa bulchiinsa IHADIG kan waggoota 20 lakkofsisee kuffisuuf yaaliin akka jiru kan ibsan mummichi ministeera Itiyoophiyaa deemsiiakkasii Itiyoophiyaa keessaa irratti kun hin hojjatu.Garuu yeroo kana jennu moo kanneen yaalii godhan hin jiran jechuu miti jedhan.
MP3 tuquun gabaasa guutuu dhaggefadhaa
Shawaa Lixaatti Namoonni Sadi Ajjeefamuu Bakka Bu'aan Boordii Filannoo Beeksise
Lammiin Ameerikaa Filannoo Taajjabuuf Itiyoophiyaa Deeman Kutaa Hoteelaa Keessatti Du’anii Argaman
Gaafii fi Deebii, Meejer Jeneraal Baacaa Dabalee Wajjin
"Filannoon Rakko Siyyaasa Itiyoophiyaa hin Furu"
Duuti Lammii Ameerikaa Hoteela Keessatti Du’ee Argamee, Sababaa Uumamaan Tahuu Qorannaan Hospitaalaa Mirkaneesse: Poolisii
Nama Nagaa Gabaaf Dhufe Malee Hidhataan Tokko hin Turre: Jiraataa
Kanneen Sagalee Kennan Walaba Ta'anii Geggeessan: Taajjabdoota